Acute stress reaction (စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော လတ်တစ်လော သက်ရောက်မှုများ ) - Hello Sayarwon
Acute stress reaction (စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော လတ်တစ်လော သက်ရောက်မှုများ )
Phyo Wai Yan မှ ရေးသားသည်။ 12/09/2019 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Acute stress reaction (စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော လတ်တစ်လော သက်ရောက်မှုများ ) ကဘာလဲ။
ထိုသက်ရောက်မှုများဟာ စိတ်ဖိစီးမှုများခံစားနေရတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ လတ်တလောဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဟာတော့ လျင်လျင်မြန်မြန်ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အကြာကြီးရှိမနေပါဘူး။ ထိုသို့သက်ရောက်မှုများဟာပြင်းထန်လေ့ရှိပြီး မမျှော်လင့်ထားတဲ့ဘဝအပြောင်းအလဲများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
ဥပမာ ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ခြင်း ၊ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ယောက်သေဆုံးသွားခြင်း သို့ ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ ဖြစ်စဉ်များကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ယာဉ်တိုက်မှုများဟာ နှစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေလေ့ရှိပြီး သင်ဟာလည်း ဒီလိုဖြစ်ရပ်များကြောင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေခံစားရတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြသ်ပေါ်လာတတ်လတ်တလောသက်ရောက်မှုများဟာ မဒိန်းကျင့်ခံရခြင်း ၊ အိမ်တွင်းပြသနာများ စသည်တို့ကြောင့်လည်းဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
Acute stress reaction (စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော လတ်တစ်လော သက်ရောက်မှုများ ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ကြောက်စရာကောင်းလောက်သော မတော်တဆမှုများ သို့မဟုတ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ခံစားနေကြရသူများတွင်တွေ့ရပါတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ပွဲများဖြစ်ပေါ်နေသော နိုင်ငံရှိလူများတွင်လည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ စစ်သားတွေဟာလည်းစစ်ပွဲအတွင်းများခြောက်ခြားစရာများကြုံတွေ့ရသောကြောင့်သူတို့ဟာလည်းရောဂါဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိရဖို့ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Acute stress reaction (စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော လတ်တစ်လော သက်ရောက်မှုများ ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ရောဂါလက္ခဏာများဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေနဲ့ နာရီပိုင်း မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပင်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ထိုလက္ခဏာများဟာ သူ့ဘာသာသင်သာသွားလေ့ရှိပြီး အချို့လက္ခဏာတွေကတော့ ရက်များစွာ သို့ အပါတ်များစွာအထိရှိနေနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်တဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း ၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်အတက်အကျဖြစ်နေခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ အာရုံစိုက်မရခြင်း၊ တစ်ယောက်တည်းနေချင်ခြင်း၊ မသာယာဖွယ်အိပ်မက်များ သို့ အတိတ်အကြောင်းအရာများ ပြန်ပြန်အမှတ်ရနေခြင်း၊ အတိတ်ကိုတူးဆွမယ့်အရာမှန်သမျှကိုရှောင်ရှားနေခြင်း(ဆိုလိုတာကတော့ လူများ ၊ အခမ်းအနားများ သို့ အခြားအခြေအနေများဟာ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့် စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ) ၊ မိမိကိုယ်ကိုပြန်ထိခိုက်နိုင်သည့်အလွန်အကဲတုံ့ပြန်နေခြင်းများ ၊မိမိကိုယ်ကိုအသုံးမကျသောလူတစ်ယောက်နှင့်အခြားလူများနှင့်ကင်းကွာနေသည်ဟုခံစားနေရခြင်း ။
နှလုံးတုန်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း ၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်မှာဖော်ပြမထားတဲ့ရောဂါလက္ခဏာများရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးအသေးစိတ်သိချင်လျှင်တော့ ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Acute stress reaction (စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော လတ်တစ်လော သက်ရောက်မှုများ ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မမျှော်လင့်ထားတဲ့ဘဝအပြောင်းအလဲများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဥပမာ ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ခြင်း ၊ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ယောက်သေဆုံးသွားခြင်း သို့ ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ ဖြစ်စဉ်များကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ယာဉ်တိုက်မှုများဟာ နှစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေလေ့ရှိပြီး သင်ဟာလည်း ဒီလိုဖြစ်ရပ်များကြောင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေခံစားရတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြသ်ပေါ်လာတတ်လတ်တလောသက်ရောက်မှုများဟာ မဒိန်းကျင့်ခံရခြင်း ၊ အိမ်တွင်းပြသနာများ စသည်တို့ကြောင့်လည်းဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
Acute stress reaction (စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော လတ်တစ်လော သက်ရောက်မှုများ ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ကြောက်စရာကောင်းလောက်သော မတော်တဆမှုများ သို့မဟုတ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ခံစားနေကြရသူများတွင်တွေ့ရပါတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ပွဲများဖြစ်ပေါ်နေသော နိုင်ငံရှိလူများတွင်လည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ စစ်သားတွေဟာလည်းစစ်ပွဲအတွင်းများခြောက်ခြားစရာများကြုံတွေ့ရသောကြောင့်သူတို့ဟာလည်းရောဂါဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။
Acute stress reaction (စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော လတ်တစ်လော သက်ရောက်မှုများ ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရောဂါလက္ခဏာများဟာ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များပြီးတာနဲ့ပျောက်ကင်းသွားလေ့ရှိတာကြောင့်ကုသဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ လက္ခဏာများရဲ့အကြောင်းရင်းကိုနားလည်သိရှိပြီး ထိုအရာများကို သူငယ်ချင်း သို့ မိသားစုဝင်များနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းဟာသက့်ကိုကူညီနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်လည်းအချို့လူများတွင်တော့ ရောဂါလက္ခဏာများဟာ အတော်ကြာနေတတ်ပါတယ်။
Acute stress reaction (စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော လတ်တစ်လော သက်ရောက်မှုများ ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ထိုကုသမှုဟာတော့ စကားပြော၍ကုသခြင်းဖြစ်ပြီးစဉ်းစားသည့်ပုံစံများကို စိတ်ကျန်းမာရေးပြသနာများကို ပိုဆိုးစေ သို့ ပိုကောင်းစေသည့် အချက်အပေါ်မှာအခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကုသမှုဟာ သင့်ရဲ့လက်ရှိစဉ်းစားနေတဲ့ပုံစံကိုနားလည်စေပါလိမ့်မယ်။ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ၊ အကျိုးမပေးတဲ့ ၊ မှားယွင်းနေတဲ့အတွေးများ အကြံများကို သင့်ကိုထောက်ပြပါလိမ့်မယ်။
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သင့်ရဲ့တွေးခေါ်ပုံကိုပြောင်းလဲပစ်ပြီးဒီလိုအတွေးများမှရှောင်ရှားစေနိုင်ဖို့နှင့်သင့်ရဲ့တွေးခေါ်မှုပုံစံကိုပိုပြီးသဘာဝကျပြီး အကျိုးရှိစေနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကုသမှုကို စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လတ်တလောသက်ရောက်မှုများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုတဲ့အခါ ဒဏ်ရာကိုဦးတည်ပြီး ကုသတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပြောင်းလဲသည့်ကုသမှုလို့ခေါ်ပါတယ်။
ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ ပြင်းထန်ပြိးအချိန်ကြာမြင့်နေလျှင်တော့ ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်းဟာနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်းဟာ သင့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုများ နဲ့ရောဂါလက္ခဏာများအပေါ်ရင်ဆိုင်ရန်နည်းလမ်းများကိုပြသပေးပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကိုအပြင်တွင်သာပြုလုပ်လေ့ရှိပြီးအချို့အဖွဲ့အစည်းများကတော့အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အချက်အလက်များတင်ပေးထားပြီး အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။
Beta blocker ဟုခေါ်သောဆေးဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဟော်မုန်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေပါလိမ့်မယ်။ ထိုဆေးဟာ ဆေးစွဲမှာစိတ်မပူရတဲ့အပြင် စိတ်ငြိမ်ဆေးလည်းမဟုတ်သလို ငိုက်မျဉ်းခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုမထိခိုက်စေပါဘူး။ ထိုဆေးကိုလိုအပ်သလိုသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ Diazepam ကတော့ စိတ်ငြိမ်ဆေးဖြစ်ပြီးသုံးခဲ၍ အချို့ကိစ္စများအတွက် အချိန်ခဏတာသာ အသုံးပြုပါတယ်။ ထိုဆေးဟာ စွဲသည့်အပြင် ရက်များစွာစွဲသောက်မိလျှင်သူ့ရဲ့အာနိသင်များလျင်မြန်စွာကျသွားပါတယ်။
Acute stress reaction. https://patient.info/health/stress-management/acute-stress-reaction. Accessed October 26, 2017
Acute stress reaction. https://patient.info/doctor/acute-stress-reaction-pro. Accessed October 26, 2017
စိတ်ပြဿနာရဲ့ အကြောင်းရင်းခံကို ရှာဖွေခြင်း